ब्रेकअपको पीडालाई कसरि भुलाउने? - यादका टुक्रा
ब्रेकअपको पीडालाई कसरि भुलाउने?
1 year ago 2205 Views
चाहे हामि जति सुकै सम्हालिएर कदम किन नाचालौं। तर कहिलेकाँहि परिस्थिति हाम्रो अपेक्षा भन्दा बिल्कुल भिन्न हुन्छ। लाखौँ कोशिस गर्दा पनि हामि त्यो हालतमा एडजस्ट हुन सक्दैनौं। कहिलेकाँही वर्षौंदेखि चलिरहेको प्रेम टुक्रिन्छ र कहिलेकाहिँ बाध्यताबस तपाईहरु एक अर्काबाट टाढा सर्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाँही गलतफहमी यति गहिरो हुन्छ कि यसको कुहिरो हटाउन असम्भव भैदिन्छ। यस्तो बेलामा सबै खुशी र शान्ति हराउछ जिन्दगीबाट।
मनले यहि चाहन्छ कि कुनै यस्तो तरिका होस् जसले यो सब भुलाएर जिन्दगि जिउन मद्दत गरोस्। कुनै यस्तो औसधि होस् जसले ति सबै तिता यादहरु मेटाएर फेरी दिलमा खुशी भरिदियोस। तर अफसोस यस्तो कुनै औसधि छैन जुन खाएर ति पुराना सताई रहने यादहरु जिन्दगीबाट टाढा भागुन। औसधि नभएपनि केहि यस्ता तरिकाहरु भने छन् जसले बिस्तारै बिस्तारै भएपनि ति तिता यादहरुलाई भुलाएर तपाइंलाई जीवन जिउन मद्दत गर्छ। यदि तपाइंले ति तरिकाहरु जान्नु भयो भने तपाइंलाई यस्तो समयबाट निस्किन ठुलो मदत मिल्नेछ। आफुलाई मन पर्ने कुनै किताब पढ्नुहोस्। सामाजिक, जासुसी, रोमान्टिक, हांसीमजाक वाला किताब पढ्दा तपाइंको ध्यान बियोगबाट हटेर अन्तै मोडिन्छ। किताबका पात्रहरुको दुखमा तपाईं आफ्नो दुख बाड्न थाल्नुहुन्छ। उनीहरुको हाँसोमा आफै मुस्कुराउन थाल्नुहुन्छ। जब जब कथाका पात्रहरु विकसित हुदै जान्छन तपाइको मन पनि तिनै पात्रका कथाहरु भित्र हराउन थाल्छ।
त्यसैले यस्तो बेला आफुलाई मन पर्ने लेखकका किताव लिनुहोस् अनि पढ्न थाल्नुहोस। लेख्न थाल्नाले पनि तपाइंलाई धेरै आराम मिल्न सक्छ। मान्छेहरु भन्छन पीडाले मान्छेलाई लेखक बनाइदिन्छ। चाहे तपाइले लेखेको कहीं नाछापियोस तर तपाइंको मनको कुरा कागजमा लेखना थाल्नु भयो भने त्यसलाई राम्रो संग लेख्ने कोशिसमा भाषा, बिसय र अन्य तारतम्य मिलाउने क्रममा तपाईं यति ब्यस्त हुनुहुन्छ कि तपाइंले आफ्नो पिडा अरु कतै राखिदिनु हुन्छ। आफ्नो कुनै पुरानो यादहरुलाई समेटर सब्दमा उतार्नु अझै फाइदाजनक हनसक्छ। जब बिस्तारै बिस्तारै तपाईं ति पुराना घटना सम्झदै जानुहुन्छ तब अहिले भर्खरै घटेको त्यो नमिठो याद तपाइंको दिमाग बाट टाढा हुँदै जान्छ।
चलचित्र हेर्नाले पनि टुटेको मनलाई राहत दिन्छ। चलचित्रको यो फाइदा छ कि तपाईं बिना कुनै मेहनत २ देखी ३ घण्टा सम्म त्यहा हराउन सक्नुहुन्छ। चलचित्र हेर्दै गर्दा सामान्यतया तपाईं अरु बिसयमा सोच्नुहुन्न। त्यस चलचित्रको बिषयले तपाइंलाई त्यहि पुर्याउँछ। तपाइंलाई अधिक मन पर्ने चलचित्र तपाईं दोहोर्याएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ! आफ्नो कुनै पुरानो हबी, जसलाई तपाईंले बर्षौ देखि बिर्सनु भएको थियो, त्यसलाई फेरी याद गरेर दोहोर्याउने कोशिस गर्नुहोस। पेंटिंग, गायन, खेलकुद जस्ता तपाईलाई मन पर्ने क्रियाकलाप हरु गर्न सुरु गर्नुहोस। यस्ता रचानात्मक कामले तपाइंलाई पिडा भुलाएर जिउन सहज हुन्छ। यस्तो बानीले तपाइँलाइ जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्न पनि मदत गर्छ। त्यसैले पिडालाइ मौकामा बदल्नको लागि यसलाई अवसर मान्नुहोस अनि आफ्ना हबिहरुलाई केलाएर तिनमा लागि पर्नुहोस।
सबैजना खराब छन् भनेर सोच्नु भन्दा जसले तपाइँलाइ महत्व दिन्छ, साथ् दिन्छ, स्नेह गर्छ उसको बारेमा सोच्नुहोस्। उनीहरुका लागि समय दिनुहोस्। घुम्नुहोस, उपहार दिनुहोस्। तपाईं आफै पहल गरेर उनीहरु संग अझै नजिक हुनुहोस्। आफ्नो खालि ठाउँ भर्नाको लागि साथीभाई र परिवार जरुर तपाइंको साथमा हुनेछन। याद राख्नुहोस् कि संसारमा सबैजना खराब हुदैनन्, सबैले ढोका दिदैनन्, यस्ता मान्छे पनि तपाइँ ओरिपरी हुन्छन, जसले तपाइंको भलो चाहन्छ अनि सधैँ तपाईंलाइ साथ् दिन तत्पर रहन्छ।
कोहि गरिब दुखिको मद्दत गर्नुहोस। यसो गर्नाले मनमा आनन्द महसुस हुन्छ। ओरिपरी कुनै सामजिक कार्य हुदछ भने त्यसमा भाग लिनुहोस्। नया अनुभव अनि नया साथि जुनसुकै पिडा भुलाउन सक्छन। यसरि जब तपाइँ केहि राम्रो गर्नुहुन्छ या सोच्नुहुन्छ, तपाइंमा पनि त्यस्तै असर हुन्छ। आफ्नो वरिपरी हेर्नुहोस तब तपाइंलाई महसुस हुनेछ कि तपाईंको स्थिति त त्यति खराब पनि छैन। यसरि तपाईं आफ्नो पीडालाई बिस्तारै भुलाउन सक्नुहुनेछ।
Don't Miss it छोराको नाम – कथा
Up Next साँचो प्रेम हो या मात्र आकर्षण भनेर कसरि थाहा पाउने ?
तपाईले रोजेको पार्टनर सही कि गलत चिन्ने यी काइदाहरु गजब छन्,
सुन्दा सामान्य लाग्छ, झेल्दा उत्तिनै जटिल । अर्थात पार्टनर । सुरुमा लहलहैमा कसैलाई मन पराइन्छ । प्रेम गरिन्छ । रोमान्स…
4 days ago 5033 Views
4 days ago 1327 Views
किन गर्छन् बुढो भइसके पछि पनि बिहे ?,
जब हामी बुढो हुन्छौं, हाम्रा इच्छा, आकंक्षा, चाहना, रुची, रहर, आशा सबै खुम्चदै जान्छ । अब यस्तो बन्छु, उस्तो गर्छु…
बिहे गर्दा र नगर्दा यस्तो फरक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखियो,
4 days ago 4586 Views
बढ्दो उमेरका महिलाहरुले गर्ने यी १२ गल्तिहरुले उनीहरुलाई झन् बुढी बनाउँछ
हरेक मानिसले आफ्नो उमेर बढ्दै गएको कुरालाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यसको लागि आफूभित्र आत्मविश्वास र संसारलाई आफ्नै नजरले हेर्ने तरिका…
4 days ago 767 Views
कपाल नुहाउने बित्तिकै यी गल्ती कहिलै गर्नु हुदैन
दिनभर आफुले गर्ने कामहरुको बारेमा ध्यान नदिँदा नै कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या हुने गर्छ। त्यति मात्र हैन् कपालको स्यहार…
सहि जोडी कसरी चिन्ने ? यस्ता छन् काइदा र ट्रिक्सहरु
हामी हाम्रो वरपर आफूजस्तै व्यक्ति खोज्ने प्रयास गरिरहन्छौं, जो हामीजस्तै महसुस गर्ने होस् अथवा व्यवहार गर्ने होस् । यो खोज…
पीपलको पातको यी रोगहरु जडी ओखती हुन्छ, थाहा नपाएर हामीले दुख पाएका हुन्छौँ
धर्तीमा पाइने वनस्पतीमध्ये पीपलले अक्सिजनलाई शुद्ध गर्ने सबैभन्दा अह्म बृक्ष हो । यो एक यस्तो बृक्ष हो, जसले २४ घण्टा…
4 hours ago 3660 Views
कसरी बिग्रिन्छ कलेजो ? कसरी आफ्नो कलेजो घरैमा सफा र स्वस्थ बनाउने ?
10 hours ago 2460 Views
4 hours ago 2421 Views
यी ५ घरेलु उपायहरुले टाउको दुखेको मिलिक्कै ठिक पार्न सक्छन्,
5 hours ago 1969 Views
10 hours ago 1593 Views
4 hours ago 1032 Views
10 hours ago 1015 Views